I-China Bracket Prod and Factory | Yongguang
I-Bracket iyihadiwe ejwayelekile yohlelo lwentambo namandla okuhambisa. Zinezinhlobo eziningi ezahlukahlukene, njengebracket bracket, ibakaki elandayo, ubakaki wesikhashana, ubakaki wamabamba, ibacketer, ubakaki wesibili, ubakaki wokusika insiza, ukubekelwa izinsizakalo kubakaki kanye ne-post insulator bracket. singenza ngokwezifiso zamakhasimende ukwenza ngezifiso.
Umzimba-Wokusebenza Insimbi, Insimbi Engagqwali, Copper
Ukuqeda Hot Dip Galvanize
Ukucaciswa kwesitampu se-Strain: kunezinhlelo ezimbili eziyisisekelo zokuqina kwesitayela, 1. Iziteki ezingaxineki, ezinjengezithiyo zohlobo lwe-wedge clutch, ithanga, ukuqina kokushayisana kohlobo lwe-bolt, zingalungiswa ngokuhamba kwesikhathi. 2. Izingcibisholo ezingonakalisi, njengezingcindezi zesikhumulo sokucindezela esidinga ukufanisa ubude be-wire ngokuphelele. Izinhlobo zama-strain clamp yi-ll -1, ll -2, ll -3, ll -4, njll.
Ngolwazi lwethu olubanzi kulo mkhakha, siyakwazi ukukhiqiza futhi sinikeze ngezinto ezisezingeni eliphakeme ze-pole-line. Lezi zingxenye zisetshenziselwa ukwakha izigxobo ezinkulu nama-pylons. Imikhiqizo yethu yenziwa ngezinto ezisezingeni eliphezulu futhi ihlala isikhathi eside. Ihadiware enikeziwe ihlolwe ngokucophelela ngemuva kwenqubo yokukhiqiza ukuze iqinisekise isimo esingenakunqotshwa. Ngaphezu kwalokho, izindawo zethu zokuhamba ezibanzi zisenza sikwazi ukuletha i-pole line hardware ngohlobo oluthile lwesikhathi.
Ububanzi bethu buhlanganisa
I-Bolt (iso eliqanda)
I-anchor bolt (iso lesimbumbulu)
I-ovval yeso evulekile
Ithayi lokubopha (liqonde / lisontekile)
I-Bolt (iso elibili)
I-Oval yeso nati
Izindonga zokugoba ngaphambi kokuncipha
Thumela umnikazi wesivimbeli
Thimble iso bolt
Wela izingalo zakho
I-Spare rack (izintambo ezimbili)
I-Thimble iso let
D iron ukweseka (i-bolt ne-nati)
Uzimele wesibili (izintambo ezintathu)
Thimble iso nati
D iron ukweseka (iphini, iphini)
Isigaba / ibhodi yesiginali
Sihlala sinaka kakhulu ikhwalithi yemikhiqizo yethu. Zonke insulators zingaphansi kwamazinga we-IEC we-IEC noma we-ANSI. Siqinisekisa ukuthi inani lemikhiqizo eliqeqeshiwe ngaphambi kokuthi liphume lingu-100%. Imikhiqizo ethunyelwa e-United States, e-United Kingdom, eVietnam, e-Italy, e-Russia, e-Greece, e-Argentina, e-Chile nakwamanye amazwe nakwizifunda. Ukuze uqinisekise ikhwalithi yomkhiqizo, inkampani idlulise i-iso9001: isitifiketi sokulawulwa kwekhwalithi ye-2008, kumakhasimende asekhaya nakwamanye amazwe ukuzuza idumela elihle.
Isimo sezinsizakalo ezinhle, isikhathi sokuphendula ngokushesha, ukulethwa kwesikhathi, umthwalo nokuvumelana nezimo yilokhu ebesilokhu sikwenza kusukela ekuqaleni. Intengo yokuncintisana, ikhwalithi enhle nokulethwa kwesikhathi. Konke lokhu kuhlinzekwa yithi. Siyethemba ukuthi unentshisekelo ngemikhiqizo yethu futhi wemukelwa ngemfudumalo ukusebenzisana nawe ukuze uzuze.
Esedlule: Iso lebhola
Okulandelayo: Clevis Nut
Clevis Ulimi noma uClevis iso
Ingulube Umsila Bolt